बाल-बालिकाहरुको इस्लाम – Islam Guide
मार्च 11, 2018 मार्च 11, 2018 Comments
(तपाईंको नयाँ जीवन) فهد بن سالم باهمام द्वारा
सम्पूर्ण मानिसहरुको सृष्टि प्रकृति र इस्लाममाथि नै हुन्छ। अन्य धर्महरु वातावरण, अन्धविश्वास र आमाबुवाको शिक्षा-दिक्षाले पछि उत्पन्न भएको छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “सम्पूर्ण नवजात शिशुहरुका सृष्टि प्रकृति अनुसार नै हुन्छ, तर आमाबुवाहरुले उनीहरुलाई यहूदी, क्रिस्चियन वा मजुसी (आगो पुज्ने) बनाई दिन्छन्।” (श्रोत- बुखारी : १२९२, मुस्लिम : २६५८)
तर काफिरका मृतक बाल-बालिकाहरुसँग दुनियाँमा काफिर जस्तै मामिला गर्नु पर्छ। ती बाल-बालिकाहरु मुस्लिम हुन् वा होइनन् यसको ज्ञान अल्लाह बाहेक अरु कसैलाई पनि छैन। उहाँ कसैमाथि अन्याय गर्नु हुन्न। अल्लाहले ती बाल-बालिकाहरुलाई कयामतको दिन परीक्षा लिनु हुनेछ। सफल हुने बाल-बालिकाहरु स्वर्गमा जानेछन् भने असफल हुने बाल-बालिकाहरु नरकमा जानेछन्।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सित काफिरका बाल-बालिकाहरुको ’boutमा सोधिदा उहाँले भन्नु भएको छ… “अल्लाहले जुन बेला उनीहरुलाई सृष्टि गर्नु भयो, उनीहरुले के गर्नेछन् भन्ने कुरा उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो।” (श्रोत- बुखारी : १३१७)
तर कुन बेला काफिरका बाल-बालिकाहरुलाई मुस्लिम भन्न सकिन्छ?
निम्न अवस्थामा बाल-बालिकाहरुलाई मुस्लिम भन्न सकिन्छ…
१) आमाबुबा दुवै वा कोही एकले इस्लाम ग्रहण गर्छन् भने उनीहरुको बाल-बालिकाहरुलाई मुस्लिम भन्न सकिन्छ।
२) आमाबुबाले इस्लाम स्वीकार नगरे पनि काफिरका नाबालिग चेतनशील बाल-बालिकाहरुले इस्लाम ग्रहण गर्छन् भने उनीहरुलाई मुस्लिम भन्न सकिन्छ। एउटा यहूदी बालक रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को घरमा काम गर्थ्यो। एक दिन ऊ बिरामी भयो। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसलाई भेट्न र सन्चो बिसन्चो सोध्न उसको घर जानु भयो। उसको टाउकोको नजिक बसेर भन्नु भयो… “मुस्लिम बन” त्यो बालक आफ्नो बुवालाई हेर्न थाल्यो र उसको बुवाले जवाफ दियो… हेर बाबु ! सक्छस् भने उहाँ (अबुल-कासिम) को कुरा मान, त्यसपछि उसले इस्लाम ग्रहण गर्यो। त्यहाँबाट रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), “अल्लाहको कृपा छ, जसले उसलाई नरकबाट जोगाई दिनु भयो भन्दै बाहिर निस्कनु भयो।” (श्रोत- बुखारी : १२९०)
के आमाबुबा दुवैले वा कोही एकले इस्लाम ग्रहण गर्यो ?
हो => हो… उसको बालबच्चा मुस्लिम हो र त्यसमाथि इस्लामको हुकुम लाग्छ।
होइन => के बाल-बालिकाले घरबाट अलग भएर इस्लाम ग्रहण गरेको छ ?
हो => यदि चेतनशील छ भने ऊ मुस्लिम हो र उसको इस्लामले परलोकमा नाफा पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा मुस्लिम समुदायको सर्व सम्मति छ।
होइन => काफिरका मृतक बाल-बालिकाहरुसँग दुनियाँमा काफिर जस्तै मामिला गर्नु। ती बाल-बालिकाहरु मुस्लिम हुन् वा होइनन् यसको ज्ञान अल्लाह बाहेक अरु कसैलाई पनि छैन। उहाँ कसैमाथि अन्याय गर्नु हुन्न। अल्लाहले ती बाल-बालिकाहरुलाई कयामतको दिन परीक्षा लिनु हुनेछ। सफल हुने बाल-बालिकाहरु स्वर्गमा जानेछन् भने असफल हुने बाल-बालिकाहरु नरकमा जानेछन्।
वर्ग: तपाईंको नयाँ जीवन